Wohler ထုတ်ကုန်များ CCW ၂၀၁၄ | NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » CCW 2014 မှာ Wohler ထုတ်ကုန်များ
Wohler Technologies က ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
Tachyon (R) Wormhole (TM) မီဒီယာ Retiming
ဗွီဒီယိုနဲ့အသံအရည်အသွေးကိုသာထိန်းသိမ်းနေစဉ်ဆုရ Tachyon (R) Wormhole (TM) ဖိုင်-based မီဒီယာ retiming ဖြေရှင်းချက်တစ်ပေါင်းသို့မဟုတ်အနုတ် 10 ရာခိုင်နှုန်းကို runtime ကညှိနှိုင်းမှုမှတက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း စာတန်း သမာဓိရှိ။ Cinnafilm ရဲ့လူကြိုက်များ Tachyon algorithms နှင့် Wohler RadiantGrid Intelligent မီဒီယာေူပာင်းလဲရေးကိုပလက်ဖောင်း (TM) မူဘောင်ပေါ်အခြေခံပြီး, Tachyon Wormhole သူတို့ကို "မထိုက်မတန်ခြင်းနှင့်ဖြည့်ပါ" ခွင့်ပြု, content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများအဘို့အချိန်ကယ်တင် - အလွယ်တကူသမာဓိမထိခိုက်စေဘဲတိကျတဲ့ဖောက်သည် '' အရှည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အကြောင်းအရာညှိ သို့မဟုတ်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်စာတန်းထိုး / စာတန်းထိုး၏အရည်အသွေး။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်, ဒီချဉ်းကပ်မှုအသုံးပြုသူများကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာတစ်ခုတည်း Server နဲ့စျေးကြီးအထူးပြုဟာ့ဒ်ဝဲမှာများစွာသောသဘောတူညီချက်အစားထိုးခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Tachyon Wormhole ပြန်ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ဖြန့်ဖြူးဖို့အချိန်ပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုရုပျပစ်စညျးမိမိတို့၏မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှု viewer ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲအသစ်သောဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခွင့်ပြုသည်သာ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-Tachyon-Wormhole.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Tachyon (R) Wormhole (TM) ဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေပြုမီဒီယာ Retiming ဖြေရှင်းချက်
RadiantGrid Intelligent မီဒီယာေူပာင်းလဲရေးကိုပလက်ဖောင်း (TM) ဗားရှင်း 8.7
အဆိုပါ Wohler RadiantGrid Intelligent မီဒီယာေူပာင်းလဲရေးကိုပလက်ဖောင်း (TM) ၏ဆုရဗားရှင်း 8.7 ထုတ်လွှင့် multiplatform မီဒီယာပေးပို့ဘို့ဖိုင်-based Workflows များ၏ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအစွမ်းထက် tools တွေအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းဒီနေ့ရဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဝေဂေဟစနစ်များအတွက်လိုအပ်သောပစ်မှတ်နည်းနည်းနှုန်းထားများ, ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့်ဘောင်နှုန်းထားများ၏ခင်းကျင်းတွေ့ဆုံအတွက် MPEG-Dash, HLS ဖွ, နှင့် Microsoft ချောမွေ့လွှအပါအဝင်ဦးဆောင်ပုံစံများများအတွက်အပြည့်အဝလိုက်နာ OTT ပြုသောပူဇော်သက္ကာ, ဖွနှင့်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သူများ ။
မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့အင်ဂျင်မကြုံစဖူးအမြန်နှုန်းမှာဗီဒီယိုအတူရှုပ်ထွေးအသံကျယ်လောင်ဆုံးမပဲ့ပြင် parallelizes ။ ထိုကဲ့သို့သော anamorphic ဗီဒီယိုကိုကိုင်တွယ်, 2K / 4K အဖြစ် optimized ဗီဒီယိုကိုပိုက်လိုင်း features တွေနှင့်အတူ က Ultra HD 16-bit မှာ YUV မှတက်, အ RadiantGrid ပလက်ဖောင်း RadiantGrid နှင့်အတူတိုးမြှင့်ထားပြီး၏ထောက်ခံမှုနှင့်နည်းနည်းနက်နဲသောပင်လယ်အတွင်းပြည့်စုံ NTSC နဲ့ PAL အရောင်လိုက်နာမှုသေချာစေရန် algorithm ကိုထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် Wohler ရဲ့ထူးခြားတဲ့ RightHue leverages ရာအမှန် (TM) ဗွီဒီယိုကိုတရားဝင် option ကို, (TM) ဖိုင်ကို-based ဒိုမိန်း။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-RadiantGrid.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: RadiantGrid Intelligent မီဒီယာေူပာင်းလဲရေးကိုပလက်ဖောင်း (TM)
MPEG ဒီဗွီဘီ-asi နှင့် IPTV မော်နီတာ
အိုင်ပီ-oriented ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်များဆီသို့ပြောင်းရွှေ့အဆောက်အဦများအတွက်အရေးပါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပံ့ပိုး, ထိုဆုရ MPEG စီးရီးမော်နီတာကုဒ် MPEG-2 /4asi နှင့် Ethernet IP ကိုစီးအဖြစ် 3G ကနေအစီအစဉ်ကိုအကြောင်းအရာအဆင်ပြေမှာ-a-တစ်ချက်စောင့်ကြည့်မှုများကို /HD-SDI သွင်းအားစု။ အသုံးပြုသူများ browse လုပ်နိုင်စွမ်းပေးခြင်းနေစဉ်, high resolution ကတော့နှစ်ခုစလုံး MPEG-2 MPEG-4 အချက်ပြမှုများ (BNC သို့မဟုတ် Ethernet ကနေတဆင့် input ကို) စီး-based စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း, MPEG ကိုဗီဒီယိုမော်နီတာဖော်ထုတ်ရန်, ကုဒ်ဖြုတ်နှင့် display ကိုအဘို့အထုတ်လွှင့် '' တိုးမြှင့်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန် တစ်ဦးချင်းစီကိုရှေးခယျြစီးဘို့ Pat, PMT, PID, EIT နှင့် NIT ဒေတာ (ATSC နှင့်ဒီဗွီဘီစားပွဲနှစ်ခုလုံး) ။ MPEG asi နှင့် Dual-input ကိုအပြင် 3G /HDကွင်းဆက်-မှတဆင့်အတူ -SDI, အ MPEG ကိုလည်းအဆင့်ကိုမီတာ GPI နှင့်တာလီချိုးနှင့်အတူအသံလိုက်လျောညီထွေစောင့်ကြည့်။ အဆင်ပြေစောင့်ကြည့်မှုစွမ်းရည်များ Dolby ဒီဂျစ်တယ်လ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် + ဒီကုဒ်ဒါအဖြစ် 12 အသံအုပ်စုများအဖြစ်အများအပြားရန်ဒီကုဒ်နိုင်စွမ်းများပါဝင်သည်။ အသံ၏လိုင်းများ 16 မှတက်၏ in-ရုပ်ပုံအဆင့်အထိမီတာကို select မီတာကြေးခွံတွေနဲ့နှစ်ဦးစလုံး၏ပျမ်းမျှနှင့် ppm (အထွတ်အထိပ်) အဆင့်ဆင့်ပေးထားပါသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-MPEG-4290-VideoMonitor.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Wohler MPEG-4290 ဗီဒီယိုု့ကပ်ရေး
AMP2-E16V စီးရီးရွေ့ပြောင်းပေး Audio / Video ထုတ်ယူခြင်းု့ကပ်ရေး
အဆိုပါ AMP2-E16V မော်နီတာရဲ့အင်္ဂါရပ်စာရင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရှည်ဆုံးဖြစ်ဆက်လက်ဖြစ်သော်လည်း, ထုတ်ကုန်တစ်ဦး-touch နဲ့ရိုးရှင်းနှင့်အတူလည်ပတ်နေသည်။ ၎င်း၏ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအသံစနစ်ကအပြင်မှာ, တစ်ပြိုင်နက် multiformat စောင့်ကြည့်ရေး, အမြန်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း, လက်ငင်းစတီရီယို downmix, အသံကျယ်စောင့်ကြည့်မှု, SDI Re-embedding, နှင့်အသံနှောင့်နှေးအပါအဝင်ပြည်တွင်းရုပ်သံလိုင်းရောစပ်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါမော်နီတာလည်းကျယ်ပြန့်မီတာကြေးခွံများနှင့်မီတာကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းများစွာအမျိုးမျိုး, ဗီဒီယို, နှင့် Dolby သို့မဟုတ်ပါဝင်သည် SMPTE 2020 metadata ကို။
အဆိုပါ AMP2-E16V Dolby မှန်ဘီလူး, Dolby အီးလိုင်းအနေအထားနှင့်စီအာစီအမှားစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖြစ် signal ကိုသွင်းအားစု, 32 ပြည့်စုံသည့်စနစ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံရလာဒ်ကဒိတစ်ဦးပြည့်စုံပြည်တွင်းရေးအကူအညီနဲ့စနစ်, နှင့် Ethernet ဟာဆော့ဖျဝဲ updates များကိုအပေါ်မှာအခြေခံအလိုအလျောက်စနစ်အစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ audio Processor ကိုကဒ်ရွေးချယ်စရာအများအပြား SDI, AES I / O, Analog စ I / O နှင့်ပြင်ပပတ်လည်စနစ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်လွယ်ကူသော configuration ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။
အသစ် AVB စောင့်ကြည့် Option ကိုကဒ် AVB channel များကိုရောနှောခြင်းကိုခွင့်ပြုအဆင့်ကို-ချိန်ညှိခြင်း, AES, SDI, Analog စနှင့်အခြား input type ကိုအတူစောင့်ကြည့်လျက်, တူညီတဲ့ဖက်ရှင်ပါ။ နောက်ထပ်တိုးမြှင့်မှုများကျယ်လောင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တိုးချဲ့အသံ interface များပါဝင်သည်ဖို့အင်္ဂါရပ်အစုံနှင့်စွမ်းရည်များတိုးချဲ့အသစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ module တွေနှင့်အသစ်တီထွင် software ကိုပါဝင်သည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-AMP2-16V-Audio-VideoProcessingMonitor.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Wohler AMP2-E16V ပေး Audio / Video ထုတ်ယူခြင်းု့ကပ်ရေး
AMP1-16M Dual-3G /HD/ SD က-SDI အသံု့ကပ်ရေး
Wohler ရဲ့အသစ် AMP1-16M Dual-input ကို SDI အသံမော်နီတာ / နှစ်ခု 3G အတွက်ပါဝင်သောအသံဖိုင် high-performance ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုထောက်ပံ့HD/ SD က-SDI အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းမှာစီး။ အဆိုပါ 1-ru သည့်စနစ်က de-မြှုပ်ထည့်ထားသည်များနှင့်ရွေးချယ်ထား 16G အတွက်3အော်ဒီယိုချန်နယ်မဆိုသို့မဟုတ်အပေါင်းတို့၏မီတာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးစွမ်း /HD/ SD က-SDI စီး။ ဒါဟာမဆိုရွေးချယ်ထားသည့်ရုပ်သံလိုင်း built-in စပီကာမှ pair တစုံကို (s), နားကြပ်ခြင်းသို့မဟုတ် XLR- များထဲမှ-touch နဲ့စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကဉျြးခြုပျဖွင့်, တောက်ပ 2.4 လက်မအရွယ် LED-backlit LCD ကို display တွေသုံးပြီးအလိုလိုသိစစ်ဆင်ရေးများနှင့်အဆင့်ဆင့်၏ရှင်းလင်းသော display ကိုများနှင့်အခြားအရေးပါသတင်းအချက်အလက်အာမခံထား မျှမျှတတ analog စလက်ငင်း။
အဆိုပါ AMP1-16M မော်နီတာ, ညာ, Ethernet နဲ့ USB ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်အသုံးပြုသူ-defined ရလာဒ်ကဒိ၏ setup ကိုနှင့်သိုလှောင်မှုအတွက်ဝေးလံခေါင်သီလက်လှမ်းအပါအဝင်အဆင်ပြေစွမ်းရည်တစ်အရေအတွက်, အမြတ်ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ / left အဖြစ် channel များကို assign လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအော်ဒီယိုချန်နယ်အပေါ်ကိုချုံ့ features သို့မဟုတ်စင်တာ (နှစ်ဦးစလုံး) ကိုပြည်တွင်းရေးအသံစနစ်နှင့်ယင်း analog စလက်ငင်းရန်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးဖြတ်သန်းခြင်းတစ်ဦးချင်းစီ SDI input ကိုနှင့်ရွေးချယ်ထားစောင့်ကြည့် SDI စီးတဲ့ reclocked output ကို၏ပေးထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-AMP1-16M-Dual-3G-HD-SD-SDI-AudioMonitor.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Wohler AMP1-16M Dual-3G /HD/ SD က-SDI အသံု့ကပ်ရေး
RDM-173 လျှော-Out Rackmount ဗီဒီယိုု့ကပ်ရေး
Wohler ကုမ္ပဏီ၏ RDM-173 ဆလိုက်ထွက်သည်ဗီဒီယိုမော်နီတာ, ခိုင်မာတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးရေးကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် 1-ru rackmount စနစ်နှင့် 17 လက်မအရွယ်မည်ဖြစ်သည် HD က IPS အာကာသ-သတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာများအတွက်စံပြသောဒီဇိုင်းအတွက် display ကို (1920 1080 x) ။ AV စနစ် conferencing နှင့်အီလက်ထရောနစ် newsgathering (ENG) နှင့် OB ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်လယ်ကွင်းထုတ်လုပ်မှု (EFP) flypacks သို့ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းက, RDM-173 / 3G အပေါငျးတို့သပုံစံများကိုထောက်ပံ့HD/ SD က-SDI, HDMI, DVI, ပေါင်းစပ်, Y ကို A / C များနှင့်အစိတ်အပိုင်းကိုဗီဒီယို။ high-resolution display V နှငျ့နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပုံ-In-ရုပ်ပုံလွှာ (PIP) နှင့်ရုပ်ပုံ-by-ရုပ်ပုံလွှာ (PBP) display ကို Modes သာ° 160 အားဖြင့် 140 ° H ကို၏ထောင့်ကြည့်ရှုအတူထိပ်တန်းပုံရိပ်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကိုပေးစွမ်းသည်။ အဆိုပါယူနစ်တစ်ဦးအပေါ်မျက်နှာပြင် 16-ရုပ်သံလိုင်းအဆင့်မီတာအဖြစ် waveform နှင့် vectorscope Display, တာလီချိုး, အချိန်ကုဒ်, format ကိုခင်းကျင်းပြသနှင့်ဧရိယာ / ခေါင်းစဉ်လုံခြုံညွှန်းကိန်းပေးပါသည်။ front-panel ကိုထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင် On-screen ကို menus တွေ configuration ကိုလွယ်ကူပါတယ်ပါစေ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Wohler/Wohler-RDM-173-3GFrontView.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: RDM-173-3G တပ်ဦးကြည့်ရန်
ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုနှင့်အသစ်ဝင်ငွေ-generation အခွင့်အလမ်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့် - - သူတို့ရဲ့နည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ်ဦးအလျှင်အမြန်ပြန်လာ "CCW 2014 မှာကျွန်တော်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိရောက်မှုနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အသုံးပြုသူများအားဖွကြောင်းဆန်းသစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူထုတ်ကုန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ချောမွေ့စွာနောက်ထပ်ကြော်ငြာအစက်အပြောက်ထည့်သွင်းရန်နှင့်မီဒီယာများ၏လက်စွဲတည်းဖြတ်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးဘို့အကြောင်းအရာ runtime ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းအပါအဝင်ဆုရ Tachyon Wormhole ဖိုင်-based မီဒီယာ retiming ဖြေရှင်းချက်၏စွမ်းရည်များသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ "
- Craig Newbury အရောင်း Wohler ၏ဒုတိယဥက္ကဌ
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ Wohler ရဲ့အစဉ်အလာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဦးဆုံး In-ထိန်သိမ်းအသံစောင့်ကြည့်ရေးထုတ်ကုန်၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူထက်ပို 30 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့ပြီးကြောင့် baseband, စမ်းချောင်းနှင့်ဖိုင်-based domains များ span နှင့်ပါဝင်သည်ကိုမူထူးခြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်၏ကုမ္ပဏီ၏ဆက်လက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်ယနေ့ဆက်လက် ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်စာတန်းထိုး application များအတွက်အဆင့်မြင့်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်; IP ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု, encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါအဘို့အဖြေရှင်းချက်; နှင့်အကျိုးရှိစွာဖိုင်-based အကြောင်းအရာအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်ဆုရ RadiantGrid (TM) ပလက်ဖောင်း။ အတူတူ, Wohler ရဲ့အဆင့်မြင့်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောယုံကြည်မှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့်မီဒီယာအသွင်ပြောင်းထုတ်ကုန်မဆို device ကိုမှမဆိုပလက်ဖောင်းများနှင့်ပေးပို့တလွှားက high-quality ထုတ်လုပ်မှုအာမခံပါသည်။ Wohler အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.wohler.com.
4K အကြောင်းအရာ သိုလှောင်ခြင်း 2014-10-24
ယခင်: ဒါရိုက်တာ Mark အင်ဒရူး Madheart ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: ARRI Alexa IBC 2014 Showreel ...